> Resource > Android > Sidee inuu ka soo kabsado Messages tirtiray ka HTC EVO 4G
Ma jiraa hab inuu ka soo kabsado fariimaha tirtiray ku ah HTC EVO 4G?
Guud ahaan, dad badan u arkaan in mar farriimo ayaa la tirtiray ka HTC EVO 4G, ma jirto si loo helo dib. Sida xaqiiqadu, ay khaldan yihiin. Waxaa suuragal ah in qalab kabashada xogta si ay u soo kabsadaan haddii meesha Farriinta tirtiray kaydiyaa hore aan overwritten. Waxaa laga yaabaa in dhawaajiyaan yar adag in la fahmo, laakiin waxba ma ahan. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad tan ka fikira: joojiso isticmaalka telefoonka ka dib markii aad hesho farriimo aad laga badiyay (aan loo eegayn waxa aad samayn ku saabsan telefoonka, waxaa laga yaabaa in ay curiyaan macluumaadka cusub, taas oo ka dhigi kartaa xogta aad lumay unrecoverable.). Markaas ka heli qalab kabashada fariin u telefoonada HTC EVO 4G ah ugu dhaqso badan si ay u soo ceshano aad fariimaha lumay.
Sidee inuu ka soo kabsado fariimaha lumay ee telefoonada HTC EVO 4G
Marka hore, soo kabashada hesho xogta qalab midig: Wondershare Dr.Fone for Android (Android Data Recovery)
Software Wondershare Dr.Fone for Android Tani waxay aad u saamaxaaya in ay dib u soo ceshano xogta sida farriimaha, xiriirada, sawiro, videos, audio iyo waraaqaha aad HTC EVO 4G. Maadaama uu interfaces fudud, waxaad ku dhameysan kartaa habka soo kabashada oo dhan 3 kaliya tallaabooyin la mashaakil lahayn. Ka sokow HTC EVO 4G, waxa ay si fiican u la shaqeysaa badan telefoonada Android kale iyo kiniiniyada ka Samsung, Google, Sony, LG, Motorola, iyo in ka badan. Waa maxay sababta aan lahayn isku day ah in ay hadda eego?
Bilowga aad, si fudud u laban laabo guji icon ay ku maamulaan Wondershare Dr.Fone for Android ka dib markii aad u rakibay on your computer. Suuqa ayaa bilowday waxaa ka mid ah la soo bandhigi doonaa sida soo socota.
Tallaabada 1. Calan telefoonka hab debugging USB
Ka hor inta aadan telefoonka ku xidhmaan waxa laga baarayo, waxaad u baahan tahay inaad dhigay hab debugging USB.
Calan debugging USB on HTC EVO 4G: Settings < fursadaha Developer < debugging USB
Marka aad aragto debugging USB , waxaa loo hubiyo. Markaas telefoonka hadda in hab debugging USB.
Tallaabada 2. Ka telefoonka xiran oo iskaan
Haddaba computer aad ku xidhi kartaa telefoonka. Marka waxaa la ogaan Wondershare Dr.Fone for Android, aad arki doonaa suuqa kala ah sida soo socota.
Marka aad halkan ku yimid, waxaad riixi kartaa batoonka Start ay ku bilowdo in aad ka baareyso phone hadda. Mid ka mid ah wax aad u baahan tahay in fiiro gaar ah waa in la hubiyo in batteriga ka badan tahay 20% eedeeyay, si ay u taageeri karaan nidaamka oo dhan baar ku soo kabsaday.
Tallaabada 3. Ladnaansho fariimaha tirtiray ka HTC EVO 4G
Waqtiga iskaanka ku xiran yahay qadarka xogta lagu kaydiyaa telefoonka, loo dhan yahay oo ah dhammaan waxyaabaha hadda jira iyo tirtiray. Marka uu dhameystiray, aad arki doonaa natiijada ka scan in barnaamijka abuuraa iyo dalabyada. Waxaa Waxaad ku eegaan karo xogta recoverable, iyo dooran shey kasta oo aad rabto. Wixii farriimo tirtiray, dooro ikhtiyaarka ah fariimaha iyo aad iyaga ka akhrisan kartaa mid mid ka hor soo kabashada. Markaas riix Ladnaansho iyaga badbaadiya, si aad u computer.
Download Wondershare Dr.Fone for Android (Android Data Recovery) oo tijaabino hadda!